Kollywood Hangama | » कंगनाविरूद्ध ऋतिकको उजुरी क्राइम ब्रान्चले हेर्ने, कंगनाले भनिन् कहिलेसम्म रून्छौ ऋतिक? कंगनाविरूद्ध ऋतिकको उजुरी क्राइम ब्रान्चले हेर्ने, कंगनाले भनिन् कहिलेसम्म रून्छौ ऋतिक? – Kollywood Hangama
कंगनाविरूद्ध ऋतिकको उजुरी क्राइम ब्रान्चले हेर्ने, कंगनाले भनिन् कहिलेसम्म रून्छौ ऋतिक?
कलिउड हंगामा । सन् २०१६ मा ऋतिक रोशनले अभिनेत्री कंगना रनौतविरूद्ध दिएको उजुरी भारतको क्राइम ब्रान्चले जाँच गर्ने भएको छ।
हालसम्म घटनाको जाँच मुम्बई प्रहरीको साइबर सेल युनिटले गरिरहेको थियो।
टाइम्स अफ इण्डियामा प्रकाशित समाचारका अनुसार ऋतिकका वकिलले मुम्बईका कमिश्नर चिठ्ठी लेख्दै उजुरी सार्न र सोको उचित जाँच गर्न आग्रह गरेका थिए।
क्राइम ब्रान्चले उजुरीको जाँच गर्ने भएपछि कंगनाले सोको प्रतिक्रिया ट्विटरमा दिएकी छन्।
’उसको दुखद् कथा फेरि सुरू भएको छ। हाम्रो ब्रेकअप र डिभोर्सको कति वर्ष भइसक्यो तर उनी अगाडि बढ्न मानिरहेका छैनन्। कुनै पनि महिलासँग डेट गर्न मानिरहेको छैन’, कंगनाले ट्विटमा भनेकी छन्, ’जब म आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा केही पाउने आशाको लागि साहस जुटाउँछु तर उ फेरि नाटक सुरू गर्न थाल्छ। ऋतिक रोशन कहिलेसम्म रून्छौ, एउटा सानो अफेयरका लागि।’
सन् २०१३ मा सुजान खानसँग सम्बन्धविच्छेद भएपछि ऋतिकसँग ’काइट्स’ र ’क्रिश ३’मा एकसाथ काम गरेकी कंगनाका कारण नै उनीहरूको सम्बन्ध सकिएको चर्चा चलेको थियो।
सन् २०१६ मा ऋतिकले कंगनालाई ’आशिकी ३’बाट निकालेपछि यी दुबैको झगडा सार्वजनिक भएको थियो।
एक अन्तरवार्तामा कंगनाले ’थाहा छैन किन एक्सले मेरो ध्यान बटुल्न मूर्ख हर्कत गर्छन’, भन्दै ऋतिकलाई कटाक्ष गरेकी थिइन्।
सोको जवाफ फर्काउँदै ऋतिकले कंगनालाई संकेत गर्दै मिडियामा नाम आएकी महिलासँग भन्दा पोपसँग सम्बन्ध बनाउने जवाफ फर्काएका थिए।
Not just Salman Khan, Hrithik Roshan might also beapart of Shah Rukh Khan’s Pathan
संसारकै सबैभन्दा धेरै चार्ज गर्ने मुख्य १० अभिनेताहरु, बलिउडबाट अक्षय एक्लै
‘अन्तिम’मा सलमानकाे यस्तो लुक